Abavelisi beRobhothi abaThengisayo - China Iipalothi eziRholayo eziBoneleli kunye neFektri
I-MOTOMAN-MPL160Ⅱ irobhothi ebethelelayo, I-5-axis emi nkqo ngokudibeneyo uhlobo, ubuninzi bobunzima obulayishayo be-160Kg, ubuninzi be-elongation ethe tyaba 3159mm, ngesantya esiphezulu kunye neempawu ezizinzileyo. Zonke izitshixo zinamandla ombane aphantsi, akukho cingo lokhuseleko luyafuneka, kwaye izixhobo zoomatshini zilula. Kwaye isebenzisa i-palletizing efanelekileyo yengalo ye-L-axis kunye ne-U-axis ukufezekisa olona luhlu lukhulu kunye nokuhlangabezana neemfuno zomsebenzisi ubukhulu becala.
Oku kubhetyebhetye kakhulu I-Yaskawa 5-axis palletizing robot iyakwazi ukuphatha imithwalo ngaphandle kokuchaphazela isantya okanye ukusebenza, kwaye izinzile kwaye kulula ukuyigcina. Ifezekisa isantya sehlabathi esikhawulezayo ngokusetyenziswa kwesantya esiphezulu se-inertia servo motors kunye nesiphelo solawulo lwethekhinoloji, ngaloo ndlela kuncitshiswa ixesha lokudubula esitratweni, ukuphucula ukusebenza koomatshini, kunye nokwenza ixabiso elikhulu kubasebenzisi.
Inkqubo ye- YASKAWA Ukubetha irobhothi MPL500Ⅱ isebenzisa isakhiwo kumngxunya irobhothi, othintela uphazamiseko phakathi iintambo kwaye uyakuqonda zero uphazamiseko phakathi iintambo, iintsimbi kunye nezixhobo peripheral. Kwaye ukusetyenziswa kwengalo ende ye-axis ye-L kunye ne-U-axis efanelekileyo yokuthambisa iyaluqonda olona luhlu lukhulu.
Isantya esiphezulu kunye nokuchaneka okuphezulu kwebhokisi YASKAWA palletizing robot MPL800Ⅱ Isebenzisa i-axis yengalo ende ye-axis kunye ne-U-axis efanelekileyo yokunyanzela ukufezekisa olona luhlu lukhulu. Isakhiwo solawulo lwe-T-axis sangaphakathi sinokuqulatha iintambo ukunqanda ukuphazamiseka kweZero kwizixhobo kunye nezixhobo zepheripherali. Isoftware ebethelayo iMOTOPAL inokufakwa, kwaye inkqubo yokufundisa ingasetyenziselwa ukwenza ukusebenza kwePalletizing. Inkqubo ye palletizing yenziwe ngokuzenzekelayo, ixesha lokufaka lifutshane, kulula ukukhetha okanye ukutshintsha imisebenzi, elula kwaye kulula ukuyifunda, kunye nokuphucula ukusebenza ngokukuko.
Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphatha ingalo yeRobot, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis,